Tontolo Arabo: Mifampiarahaba Amin’ny Fifidianana Ao Tonizia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Oktobra 2011 4:13 GMT
Nahazo fihobiana tsara avy amin'ny mpiserasera manerana ny tontolo Arabo ny Toniziana, amin'izao fotoana handehanany hifidy ireo mpikambana 218 ao amin'ny antenimieran-dalàm-panorenana izay hisahana ny famolavolana ny lalàm-panorenana ao amin'ny firenena, ary hanendry ny filoha sy ny governemanta vonjimaika.
Manan-tantara ny fifidianana satria voalaza ho toy ny ‘fifidianana malalaka voalohany ao amin'ny tontolo Arabo hatramin'ny nisian'ny revolisiona tany Tonizia, ka nitarika ny fionganan'ny fitondrana Zeine Al Abideen Ben Ali nitondra nandritra ny 23 taona, nandositra avy tao Tonizia ka nialokalofany tany Jeddah, Arabia Saodita. Nanintsana ihany koa ny filoha Ejipsiana Hosni Mubarak, izay nitondra nandritra ny 32 taona, sy ilay mpitondra jadona tao Libya Muammar Gaddafi, izay maty telo andro lasa izay, roa volana taorian'ny nifaranan'ny fitondrany nandritra ny 42 taona.
Mitodika ao Tonizia avokoa ny maso rehetra ankehitriny, amin'izao fiotazan'ny Toniziana ny vokatry ny revolisiona nitoloman'izy ireo izao.
Dima Khatib nanambara hoe:
Tonizia no laboratoara demokratikan'ny Tontolo Arabo. Manantena anareo izahay ry Toniziana
Ni-tweet i Shadi Hamdi:
Androany no nanatontosa ny fifidianana tena izy avy amin'ny lohataona Arabo i Tonizia
Nanoratra ilay Ejipsiana Bassem Sabry:
Androany no fanambarana ofisialy ny fanafahana, sy ny fifidianana malalaka voalohany amin'ny tontolo Arabo sy Tonizia
Manampy ilay Libyana Guma El Gamaty:
8 volana ny revolisiona. nanatontosa ny fifidianana demokratika voalohany i Tonizia. 8 volana taorian'ny revolisiona, hanatontosa fifidianana ao anatin'ny 8 volana ny Libyana afaka
Misentosento tamin'ny fifidianana nampiakatra ny Hamas teo amin'ny fitondrana koa ny Palestiniana Lina Al-Sharif:
Mahatsiaro afa-po amin'ny Toniziana aho. Mirary ny soa rehetra ny avy aty Palestina. Nisy ny fotoana nanao fifidianana izahay fa tsy nankasitrahan'ny tandrefana izany
Mahatsapa manana rehareha ilay Jordaniana Naseem Tarawnah:
Androany, mampirehareha ny maha-Arabo ahy i Tonizia. Mankasitraka
Mitsiky tanteraka ny namana Jordaniana Nadine Toukan:
@nadinetoukan: Bouazizi is smiling today 🙂 #Tunisia #tnelec
Nitsiky i Bouazizi androany 🙂
Manahy ny fahazoan'ny antoko Islamika Ennahda ny ankamaroan'ny seza kosa ny maro.
Mnamarika i Hoda Abdel-Hamid:
Mitari-dalana indray i Tonizia ary mandeha mifidy. mamazivazy zary tenany ny namana iray “rahampitso ho fantatsika fa lahika isika na islamista
Maneho hevitra i Blake Hounshell Tonian'ny Foreign Policy‘s mipetraka ao Doha:
Tonizia: Mety hahavita ny tsara kokoa i Ennadha satria nifantoka kokoa tamin'ny resaka asa, raha ny nifantohan'ny antoko liberaly kosa dia… Ennahda
Ary mamafa izany karazan-tahotra izany ilay Ejipsianina Mohammed Kamel:
Aza adinoina fa lahika kokoa noho isika ny Toniziana, ary lasa alohantsika izy raha resaka fahaizan-taratasy sy zon'ny vehivavy
Na inona na inona ny ho vokatry ny andro, mamehy ny fihetseham-pon'ny maro amin'ity andro manan-tantara ity i Free Tunisian na i Tounsiahourra [ar]:
@tounsiahourra: Tsy nikiaka samirery aho. Androany, nipetraka izahay ary nihomehy, mirehareha amin'ny maha-Toniziana anay. Sambany vao nifidy ny ankamaroanay. Ho an'ny maritiora sy ireo maratra nandritra ny revolisiona ny vavakay. Ireo no nahatonga ny nofinayho azo tanterahina.